Gabadh uu dhalay Bruce Lee oo shirkad cuntada fudud samaysa dawcad ku soo oogtay - BBC News Somali
Gabadh uu dhalay Bruce Lee oo shirkad cuntada fudud samaysa dawcad ku soo oogtay
Shirkad ay leedahay inantii uu dhalay Bruce Lee ayaa dacwad ku soo oogtay shirkad cuntada fudud samaysa oo Shiinaha laga leeyahay waxaanay ku eedaynaysaa in ay sawirka jilaagaa caanka ahaa ee lagu yaqaanay kaarateega ay adeegsatay.
Shannon Lee shirkadeeda oo la yidhaa Bruce Lee Enterprises waxay ku doodaysaa in shirkada Real Kungfu ay sawirkaa u qaadatay in uu noqdo astaanteeda iyada oo aan wax ogolaansho ah cidna waydiisan.
Shirkaddu waxay doonaysaa in la shirkaddaa cuntada fudud samaysaa ay sida ugu dhakhsaha badan u joojiso adeegsiga sawirkaa, waxa kale oo la sheegay in ay doonayso in la siiyo 30 milyan oo doolar oo mag dhaw ah.
Shirkadda Shiinaha ahi waxay ku dooday in maamulku sawirkaa astaanteeda noqday u ansixiyey in ay adeegsato.
Sawirku wuxu muujinayaa nin timo madow oo u taagan sidii uu kaaratee ciyaarayo.
"Astaanta Shiinaha gudihiisa ee shirkadd Real Kungfu waa mid ay shirkaddu codsi ku heshay muddo dheer oo ay wakaaladda qaranka ee astaamaha ganacsigu ka baaraan degaysay dalabkeeda. Waxaanu haatan isticmaalaynay astaantan mudo 15 sannadood ah", ayaa lagu yidhi warbixin shirkaddu ku faafisay shabakadda Weibo ee Shiinaha.
"Waanu la yaabnay sababta intaas oo sano ka dib haatan maxkamad na loola tiigsanayo, sidaas oo ay tahay aanu haatan si qoto dheer ugu dersaynaa dawacaddan oo aanu ugu diyaar garoobaynaa in aanu is difaacno.
Shirkaddan cuntada fudud samaysa oo xarunteedu tahay Guangzhou oo Af-Shiinaha na magaceeda lagu yidhaa Zhen Gongfu waxa la aasaasay 1090 waxaanay ku leedahay 600 oo makhaayadood dalka Shiinaha.
Bruce Lee Enterprises ayaa warbixin ay ku baahisay bogga ay ku leedahay internet-ka ku tidhi " waxaan u taagannahay ilaalinta iyo daryeelka fankii iyo falsafaddii Bruce Lee si dadku uga faa'iidaysaan oo ay uga gudbaan dhibaatada qof ahaan la soo derista waxaana sidoo kale ujeedadayu tahay in aanu noolayno fanka kaarateega".
Hase yeeshee shirkadda Bruce Lee Enterprises kamay jawaabin codsi aanu u dirnay oo ahaa in arintan aanu wax ka weydiino.
Dawacaddan ayaa aad looga dhur sugayaa maadaama oo xukuumadda Shiinuhu dhawaanahan ballan qaaday in ay dardar gelin doonto xeerarka ilaalinta xuquuqda hal abuurka.
Shiinaha oo albaabada u furay dadka xirfadooda ku xeeldheer